हरेक नियुक्तिमा देउवाले किन भ्रष्टाचारका आरोपीलाई काखी च्याप्छन् ?—डा. अजय क्रान्ति शाक्य – Maitri News
हरेक नियुक्तिमा देउवाले किन भ्रष्टाचारका आरोपीलाई काखी च्याप्छन् ?—डा. अजय क्रान्ति शाक्य
maitrinews February 17, 2017
नेपाली काँग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ठाडो राजनीतिक हस्तक्षेप र दबाबका कारण विभिन्न आयोग, निकाय,संस्थान तथा निगम चरम विवादमा परेका छन् । अहिले उनी सरकारभन्दा पनि शक्तिशाली छन् । उनको आदेशलाई सबैले मान्नुपर्ने वाध्यता छ । यही वाध्यताका कारण उनको दबाबमा गरिएका थुप्रै विवादास्पद नियुक्तिहरुले मुलुककै छवि धमिलिन र धराशायी हुन थालेको छ । अहिले सर्वत्र देउवा आतंक छ । उनको आतंकले मुलुक नै त्रस्त बनेको छ ।
राष्ट्रवादी अडान लिएर राष्ट्रको हितमा महत्वपूर्ण कार्य सुरु गरेको ओली सरकारलाई भारतको ईशारामा ढाली प्रचण्डसँग अपवित्र गठबन्धन गरेका देउवाले सत्ताको लगाम हातमा लिएर सर्वशत्तिमान बनेपछि उनले सारा नियम कानुनको बेवास्ता गर्दै मनपरी ढंगले विभिन्न ठाउँमा विवादस्पद छवि भएका भ्रष्टचारी आरोपीलाई धमाधम नियुक्ति गर्न वाध्य पारेका छन् । उनका अगाडि अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिलगायतका मन्त्रीहरु निरीह बनेका छन् । उनको आदेशलाई मान्न प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु वाध्य छन् । उनको आदेश नमाने कारबाही गर्ने, हटाउने धम्की दिन्छन् ।
देउवाले जहाँ जहाँ आफ्ना मान्छलाई नियुक्ति गर्न वाध्य पारेका छन् ती मान्छेहरु चरम विवाद र भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् । उनले किन भ्रष्टाचारमा मुछिएका र विवादस्पद मान्छहरुलाईमात्र काखी च्याप्छन् ? यो मुलुकमा राम्रा र असल मान्छे छैनन् र ? सर्वत्र प्रश्न उठको छ ।
पटक पटक प्रधानमन्त्री बनी सुरासुन्दरी,सांसद किनबेच,पजेरो,प्राडोलगायत थुप्र विवादस्पद काण्ड गर्दै अन्त्यमा प्रजातन्त्र दरबारमा बुझाएपछि अयोग्य प्रधानमन्त्रीका रुपमा हटाइएका देउवा काँग्रेसमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधनपछि सर्वशक्तिमान बनी पार्टी कब्जा गरेका छन् । उनको छवि पार्टीभित्र पनि राम्रो छैन । पार्टीमा पनि आफ्ना मान्छे र क्षेत्रीयतालाईमात्र काखी च्याप्ने र विरोधीलाई पाखा लगाउने नीति लिएका देउवाले अहिले सरकारलाई पनि आफ्नो ईशारमा नचाइरहेका छन् । उनका कारण मुलुक नै अर्को दुर्घटनामा जाने खतरा बढेको छ ।
राजनीतिक क्षेत्रमा अहिले भित्रभित्रै के चर्चा भइरहेका छ भने भारतले बनाएको प्रचण्ड—देउवा गठबन्धनबाटै मुलुकको गणतान्त्रिक अधिकार खोसेर प्रतिगमनमा लैजाने खेल भइरहेको छ । पहिलो यो नौ महिने प्रचण्ड कालमा त्यसको पृष्ठभूमि बन्दै गएको निष्कर्ष निकालेको भारतले अब देउवाको नौ महिने कालमा सो कार्य सम्पन्न गराएर नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता कायमै राख्ने र ओली सरकारका कारण चीनतिर ढल्केका नेपाली सत्तालाई आफ्नो प्रभावमा राख्ने काम देउवामार्फत गराउन सहज हुने अपेक्षा गरेका छन् । त्यसका लागि संविधान असफल बनाउन चुनाव हुन नदिने खेल पनि भित्रभित्रै भइरहेका छ । अहिले चुनाव गराए जनमत एमालेको पक्षमा जाने देखिएपछि भित्रभित्र देउवा र प्रचण्डले चुनाव चाहेका छैनन् । मधेसी मोर्चालाई देखाएर चुनाव पर सार्दै छन् । यो अर्को मुलुक डुबाउने राजनीतिक भ्रष्टाचार हो । देउवा किन यस्तो षडयन्त्रमा संलग्न छन् ? रहस्यको विषय बन्दै छ । देउवाका गतिविधिप्रति स्वयं काँग्रेसका इमानदार नेता तथा कार्यकर्ता असन्तुष्ट छन् । उनीहरु नै भन्दै छन् , देउवाले पार्टी र मुलुक दुवै समाप्त पाछ्र्रन् ।
नौ नौ महिना पालो पालो गरी प्रधानमन्त्री खाने भनी प्रचण्डसँग भागबण्डा गरेका देउवाले प्रचण्डको पालो सकिने दिनगन्ती सुरु भएपछि सरकार ढाल्न चेतावनी दिँदै ठाउँ ठाउँमा आफ्ना मान्छेहरुलाई धमाधम नियुक्ति गर्न बाध्य पारेका छन् । सत्ताका लोभी प्रचण्डले कुर्ची जोगाउन देउवाका प्रत्येक विवादस्पद कुरामा सहमति जनाउँदै उनलाई मनपरी गर्न छुट दिएका छन् जसले गर्दा हरेक नियुक्तिहरु चरम विवादमा पर्दै छन् ।
देउवाले न्यायाधीशको नियुक्तिमा समेत दवाव दिदा न्यायालयसमेत विवादमा मुछियो । न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिकरण भयो भन्दै सरकारी वकिलहरुले चर्को विरोध गरे । निर्वाचन आयुक्तको नियुक्ति पनि निष्पक्ष भएन, देउवाको दवाब पर्यो भन्ने गुनासो छ ।
नियम काुनन, वरिष्ठतालाई धोती लगाईदिएर सरकारबाट हट्ने सम्मको धम्की दिई प्रचण्ड र निधिलाई वाध्य पारी तेस्रो वरियाताका विवादमा मुछिएका एआईजी जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी बनाउन बाध्य परे । सो प्रकरण सर्वोच्चमा पुग्यो र सर्वोच्चले चन्दको नियुक्ति कार्यान्वयन गराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । यो प्रकरणले मुलुकको शान्ति सुरक्षामा खटिएका नेपाल प्रहरी चरम राजनीतिको शिकार बनेको छ ।
आईजीपी प्रकरण सेलाउन नपाउँदै देउवाले फेरि नेपाल वायुसेवा निगममा हस्तक्षेप गरेका छन् । उनका अगाडि पर्यटनमन्त्री निरीह बन्दै चरम विवादस्पद छवि बनाएका भ्रष्टाचारमा आरोपित निगमका पूर्वनिर्देशक अच्युतराज पहाडीलाई विज्ञका रुपमा चार वर्षका लागि सञ्चालक समिति सदस्यमा नियुक्त गरिएको छ । विगतमा विमानका पार्टपूर्जा र पाङ्गासमेत बेचर खाई निगमलाई धराशायी बनाउने पहाडीको पुनरागमनले भर्खर सुधारउन्मुख भएको निगमको भविष्यको भविष्य पुनः अन्धकार बन्ने चिन्ता निगम कर्मचारीहरुले व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
अत ः देउवाका कारण मुलुक चौतर्फी राजनीतिकरण हुँदै अस्तव्यस्त यो अवस्था नयाँ निकासका लागि प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरु मिलेर नयाँ निकास दिन आवश्यक छ । देउवाको हातमा सत्ता सुम्पे मुलुक अर्को राजनीतिक दुर्घटना हुन्छ भन्दै देउवाको विकल्प खोज्नुपर्ने कुरा स्वयं काँग्रेसका इमानदार नेता तथा कार्यकर्ताले बताउन थालेका छन् ।
Previous Previous post: किमको सेक्सी जवानी
Next Next post: धादिङमा विहानै भूकम्पको धक्का